Los bambino kaThixo House Coatepeque - I-Airbnb
Los bambino kaThixo House Coatepeque
Indlu encinci nepholileyo elunxwemeni lweChibi elimangalisayo laseCoatepeque, indawo entle yokuchitha ixesha. I-terrace emangalisayo enendawo eyaneleyo eya kwenza ukuba ufune ukuchitha imini yonke uxabisa umbono omhle ovela kwi-hammock yakho.
Ukuzonwabisa kunokuqhubeka ngaphakathi kwechibi lamatye elinika umnxeba okhethekileyo wokuhlala kwakho okanye ukuxoxa phantsi kwe-pergola ehlanganiswe yimivini inika isitayela sendalo kunye nokuzola.
Ilungele iintsapho okanye amaqela abantu abayi-8 ukuya kwabayi-10.
Indlu encinci enamagumbi okulala ama-3 ane-air conditioning kumagumbi ama-2, abekwe kwindawo yangasese.
Inethafa layo elunxwemeni lweLake Coatepeque, ichibi elijonge echibini. Zonke iindawo zifakiwe
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.74 · Izimvo eziyi-158
indawo yabucala kakhulu
Inkonzo ethobekileyo neyobuhlobo yentlonelo enkulu iya kunikelwa yaye ngaloo ndlela ikwazi ukubanceda ekuhlaleni kwabo ukuze babe nelona xesha libalaseleyo. AYIYONKONZO YASEHOTELE esinethemba lokuba undwendwe luya kubhalelana ngendlela efanayo.
Inkonzo ethobekileyo neyobuhlobo yentlonelo enkulu iya kunikelwa yaye ngaloo ndlela ikwazi ukubanceda ekuhlaleni kwabo ukuze babe nelona xesha libalaseleyo. AYIYONKONZO YASEHOTELE…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coatepeque